Ireo no fironana amin'ny haino aman-jery an'ny Adobe an'ny 2021 | Famoronana an-tserasera
Tamin'ny taon-dasa, indrindra amin'ny fahavaratra, Adobe dia nanambara ny Adobe Stock Audio y androany dia nanolotra ny fironana audio ho an'ny 2021 voalohany. Herintaona 2020 izay nampiroborobo ny famoronana atiny amin'ny ambaratonga rehetra ary noho izany ny orinasa amerikanina dia nanolotra fanangonana mozika sy lalovan-peo tsy misy zon'ny mpamorona.
Efa nandefa anao izany vaovao tsara izany avy amin'ny Adobe izahay manome atiny audio misy kalitao hanampiana lalamby am-peo na feon-kira mankany amin'ireo horonantsary izay natao tamin'ny alàlan'ny suite Creative Cloud anao; toy ny taloha ihany izahay dia nianatra avy amin'ny tanan'ny Adobe mihitsy ny fironana hita tamin'ny 2021.
Roa mahery izy ireo masoivoho natokana ho an'ny feo, Epidemic Sound ary Jamendo, izay mitondra izany amin'ny Adobe Stock Audio dia manana atiny kalitao izahay ary mamoaka ny fironana amin'ny 2021 i Adobe.
Nampiditra azy ireo tao fironana telo:
Gadona manerantany, ary izany dia maneho ireo mozika rehetra mifandraika amin'ny fahamarinana ara-tsosialy, fitoviana ary fisolo tena tena izy. Ny fironana mifamatotra akaiky amin'ny vohitra manerantany izay ankehitriny dia mozika misy fifangaroana fomba, karazana ary mpanakanto erak'izao tontolo izao.
Spectrum elektronika: apetraho ny lantom-peony amin'ny nomerika sy elektronika misongadina ho mpandresy hampiroborobo ny karazana karazana mozika rehetra; toy ny tsy manao tsirambina ny analog.
Mozika ho an'ny podcast: ity karazana atiny ity dia miha mirongatra ary te hampiseho azy ny Adobe miaraka amin'ity onjam-mozika na feonkira lavorary ity ho an'izay fiaviana tadiavinao ao amin'ny podcast. Ny gadona rehetra na ny mozika mampihetsi-po hametrahana lohahevitra rehetra resahina.
Afaka mankany Adobe Stock Audio for mankafy làlana 10 maimaim-poana ary araho araka izany raha mendrika hankafizinao izany amin'ity serivisy lehibe ity avy amina orinasa iray natokana tanteraka amin'ny fitaovana hamokarana atiny tsara indrindra amin'ny sehatry ny haino aman-jery iray manontolo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Adobe dia manolotra ny fironana audio voalohany ho an'ny 2021